Bhaibheri mune rimwe gore - Shona Bible 2009 - Kubvumbi 19
1. Zvino ndidzo ndudzi dzakasiyiwa naJehovha, kuti aidze vaIsiraeri nadzo, ivo vaIsiraeri vose vakanga vasina kuziva hondo dzose dzapaKenani;
2. nemhaka iyochetekuti marudzi avana vaIsiraeri azive, kuti avadzidzise kurwa, ivo vasina kumboziva izvozvo pakutanga,
3. vaiti: Madzishe mashanu avaFirisitia, navaKenani vose, navaZidhoni, navaHivhi, vakanga vagere mugomo reRebhanoni, kubva pagomo reBhaariherimoni, kusvikira pavanopinda paHamati.
4. Ivo vakasiyiwapo, kuti vaIsiraeri vaidzwe navo, kuti kuzikamwe kana vachida kuteerera mirairo yaJehovha yaakanga araira madzibaba avo naMozisi.
5. Vana vaIsiraeri vakagara pakati pavaKenani, navaHeti, navaAmori, navaPerizi, navaHivhi, navaJebhusi.
6. ivo vakawana vakunda vavo, kuti vave vakadzi vavo, vakapa vanakomana vavo vakunda vavo, vakashumira vamwari vavo.
7. Zvino vana vaIsiraeri vakaita zvakaipa pamberi paJehovha, vakakangamwa Jehovha Mwari wavo, vakashumira vaBhaari namatanda okunamata nawo.
8. Saka kutsamwa kwaJehovha kwakamukira vaIsiraeri, akavatengesa muruoko rwaKushani-rishataimu, mambo weMesopotamia; vana vaIsiraeri vakashumira Kushani-rishataimi makore masere.
9. Zvino vana vaIsiraeri vakati vachichema kuna Jehovha, Jehovha akamutsira vana vaIsiraeri muponesi, wakavaponesa, iye Otinieri, mwanakomana waKenazi, munun'una waKarebhu.
10. Mweya waJehovha akauya pamusoro pake, akatonga vaIsiraeri, akandorwa, Jehovha akaisa Kushani-rishataimi, mambo weMesopotamia, muruoko rwake; ruoko rwake rukakunda Kushani-rishataimi.
11. Ipapo nyika yakazorora makore ana makumi mana. Otinieri, mwanakomana waKenazi, akafa.
12. Zvino vana vaIsiraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha, Jehovha akasimbisa Egironi, mambo waMoabhu, kuti arwe navaIsiraeri, nokuti vakanga vaita zvakaipa pamberi paJehovha.
13. Akaunganidza kwaari vana vaAmoni navaAmareki, akandokunda valsiraeri, vakavatorera guta remichindwe.
14. Vana vaIsiraeri vakashumira Egironi, mambo waMoabhu, makore ane gumi namasere.
15. Asi vana vaIsiraeri vakati vachichema kuna Jehovha, Jehovha akavamutsira muponesi, iye Ehudhi, mwanakomana waGera, muBhenjamini, munhu waiva neziboshwe; vana valsiraeri vakatumira Egironi, mambo waMoabhu, chipo naye.
16. Zvino Ehudhi wakazviitira munondo wakanga wakarodzwa kunhivi dzose, wakanga wakasvika kubhiti rimwe pakureba kwavo; akausungira pasi penguvo dzake pachidya chorudyi.
17. Ipapo akandopa Egironi, mambo waMoabhu, chipo; Egironi wakanga ari munhu wakakora kwazvo.
18. Zvino wakati apedza kumupa chipo, akaendisa vanhu vakanga vakatakura chipo.
19. Asi iye amene wakadzoka pamifananidzo yakavezwa yamabwe paGirigari, akati, "Ndine shoko rakavanzika nemwi mambo." Iye akati, "Nyararai." Ipapo vose vakanga vamire naye vakabva kwaari.
20. Zvino Ehudhi akaswedera kwaari; iye wakanga agere ari oga muimba yake inotonhorera; Ehudhi akati, "Ndine shoko kwamuri rinobva kuna Mwari." Iye ndokusimuka pachigaro chake.
21. Ipapo Ehudhi akatambanudza ruoko rwake rworuboshwe, akavhomora munondo pachidya chake chorudyi, akamubaya nawo nomudumbu rake;
22. chibato chikapindawo chichitevera chese, mafuta akadzivira pamusoro pechese, nokuti haana kuvhomora munondo mudumbu rake, mafuta akabuda.
23. Zvino Ehudhi akabuda pabiravira, akapfiga mikova yeimba yokumusoro shure kwake, akaikiya.
24. Wakati abuda, varanda vake vakasvika, vakawana mikova yeimba yokumusoro yakapfigwa; vakati, "Zvimwe unofukidza makumbo ake paimba yake inotonhorera."
25. Zvino vakamira kusvikira vapera mano, asi haana kuzarura mikova yeimba yokumusoro; ipapo vakatora kiyi, vakazarura mukova, vakawana ishe wavo akawira pasi, afa.
26. Asi ivo vachanonoka, Ehudhi akapukunyuka, akapfuura mifananidzo yakavezwa yamabwe, akapukunyukira Seira.
27. Wakati asvikapo, akaridza hwamanda panyika yamakomo yaEfuremu, vana vaIsiraeri vakaburuka naye panyika yamakomo, iye akavatungamirira.
28. Akati kwavari, "Nditeverei, nokuti Jehovha wakaisa vaMoabhu, vavengi venyu, mumaoko enyu." Vakaburuka vachimutevera, vakandogarira mazambuko aJorodhani paiyambukira vaMoabhu, vakasatendera munhu mumwe kuyambuka.
29. Nenguva iyo vakauraya varume vaMoabhu vanenge zviuru zvine gumi, vose vari varume vane simba novoumhare, hakuna munhu mumwe wakapukunyuka.
30. Naizvozvo vaMoabhu vakakundwa musi iwoyo noruoko rwavaIsiraeri, nyika ikazorora makore ana makumi masere.
31. Shure kwake kwakanga kuna Shamugari, mwanakomana waAnati, wakauraya kuvaFirisitia vana mazana matanhatu norutanda rwokubaya mombe narwo; iye akaponesawo vaIsiraeri.
1. Zvino shure kokufa kwaEhudhi vana vaIsiraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha.
2. Jehovha akavatengesa muruoko rwaJabhini, mambo weKenani, wakanga achibata ushe paHazori; mukuru wehondo yake wakanga ari Sisera, wakanga agere paHarosheti ravahedheni.
3. Zvino vana vaIsiraeri vakachema kuna Jehovha, nokuti wakanga ane ngoro dzamatare dzina mazana mapfumbamwe, akamanikidza vana vaIsiraeri kwazvo makore ana makumi maviri.
4. Nenguva iyo Dhebhora, muporofitakadzi, mukadzi waRapidhoti, wakanga achitonga valsiraeri.
5. Iye waigara pasi pomuchindwe waDhebhora, pakati peRama neBheti-eri, panyika yamakomo yaEfuremu; vana vaIsiraeri vaisienda kwaari kuzotongerwa mhaka dzavo.
6. Iye akatuma nhume kundodana Bharaki, mwanakomana waAbhiNowami, paKedheshi-nafutari, akati kwaari, "Jehovha Mwari wavaIsiraeri haana kukuraira here, achiti, `Enda uswedere kugomo reTabhori, uende navarume vane zviuru zvine gumi vavana vaNafutari navana vaZebhuruni?
7. Neni ndichatumira kwauri kurukova Kishoni, Sisera mukuru wehondo yaJabhini, nengoro dzake navanhu vake vazhinji, ndivaise muruoko rwako.' "
8. Bharaki akati kwaari, "Kana imwi mukaenda neni, ini ndichaenda, asi kana imwi musingaendi neni, ini handingaendi."
9. Iye akati, "Zvirokwazvo ndichaenda newe, asi iwe haungakudzwi parwendo urwu rwaunofamba, nokuti Jehovha uchatengesa Sisera muruoko rwomukadzi." Dhebhora akasimuka, akaenda Kedheshi naBharaki.
10. Bharaki akakoka Zebhuruni naNafutari paKedheshi, akakwira ana varume vane zviuru zvine gumi vakanga vachimutevera; naDhebhora wakaendawo naye.
11. Zvino Hebheri muKeni, wakanga aparadzana navaKeni, ivo vana vaHobhabhi, mukarahwa waMozisi, akadzika tende rake kusvikira pamuouki paZaananimu, paKedheshi.
12. Zvino vakaudza Sisera kuti Bharaki, mwanakomana waAbhinowami, wakwira mugomo reTabhori.
13. Sisera akaunganidza ngoro dzake dzose, idzo ngoro dzamatare, dzina mazana mapfumbamwe, navanhu vose vaakanga anavo, kubva paHarosheti ravahedheni kusvikira parukova Kishoni.
14. Zvino Dhebhora akati kuna Bharaki, "Simuka, nokuti iri ndiro zuva raJehovha, raachaisa naro Sisera muruoko rwako; Jehovha haana kukutungamirira here?" Ipapo Bharaki akaburuka pagomo reTabhori, varume vane zviuru zvine gumi vachimutevera.
15. Zvino Jehovha akavhundusa Sisera nengoro dzake dzose, nehondo yake yose, neminondo inopinza pamberi paBharaki; Sisera akaburuka pangoro yake, akatiza namakumbo.
16. Asi Bharaki wakatevera ngoro nehondo kusvikira paHarosheti ravahedheni, hondo yose yaSisera ikaurawa neminondo inopinza, hakuna kusara kunyange nomumwe chete.
17. Asi Sisera wakatiza namakumbo kutende raJaeri, mukadzi waHebheri, muKeni, nokuti kwakanga kuno rugare pakati paJabhini, mambo weHazori, neimba yaHebheri muKeni.
18. Jaeri akabuda kundosangana naSisera, akati kwaari, "Tsaukai, ishe wangu, tsaukirai henyu kwandiri, regai kutya." Ipapo akatsaukira kwaari mutende, akamufukidza nejira.
19. Iye akati kwaari, "Ndipewo zvimvura, ndimwe, nokuti ndine nyota." Akadziura dende romukaka, akamupa, akamwa, akamufukidza.
20. Akati kwaari, "Mira pamukova wetende, zvino kana ani naani akauya akakubvunza, achiti, `Pano pano munhu here?' Uti, `Kwete.' "
21. Ipapo Jaeri, mukadzi waHebheri, akatora mbambo yetende, akatorawo nyundo paruoko rwake, akanatsoswedera kwaari, akarovera mbambo napachavovo chake, ikabuda neseri, ikabayira pasi, nokuti wakanga abatwa kwazvo nehope, aneta; akafa.
22. Zvino tarira, Bharaki wakati achitevera Sisera, Jaeri akabuda akandosangana naye, akati kwaari, "Uyai, ndikuratidzei munhu wamunotsvaka." Iye akapinda kwaari akaona Sisera akatandavara pasi, afa, mbambo ichiri pachavovo chake.
23. Naizvozvo nomusi iwoyo Jehovha wakakunda Jabhini, mambo weKenani, pamberi pavana vaIsiraeri.
24. Vana vaIsiraeri vakaramba vachingokunda Jabhini, mambo weKenani, kusvikira vaparadza Jabhini, mambo weKenani.
9. Takafunga unyoro bwenyu, Mwari, Mukati metemberi yenyu.
10. Sezvakaita zita renyu, Mwari, Ndizvo zvakaitawo kurumbidzwa kwenyu kusvikira kumigumo yapasi pose; Ruoko rwenyu rworudyi ruzere nokururama.
11. Gomo reZiyoni ngarifare, Vakunda vaJudha ngavafare kwazvo, Nokuda kwezvamakatonga.
12. Poteredzai Ziyoni, mupote naro, Muverenge shongwe dzaro.
13. Cherekedzai zvakanaka nhare dzaro, Fambai pakati pedzimba dzaro dzamambo; Kuti muzoudza vazukuru venyu vanotevera.
14. Nokuti Mwari ndiye Mwari wedu nokusingaperi-peri; Iye achava muperekedzi wedu kusvikira pakufa.
18. Vasina mano vanogara nhaka yohupenzi; Asi vakangwara vachadzikwa korona yezivo.
19. Vakashata vanogwadama pamberi pavakanaka; Navakaipa pamasuo avakarurama.
25. Zvino zvaunga zvikuru zvaifamba naye; akatendevuka akati kwavari:
26. Kana aninani achivuya kwandiri, akasavenga baba vake namai, nomukadzi, navana, navanun'una namadzikoma, nehanzvadzi, hongu, kunyange noupenyu bwakevo, haangavi mudzidzi wangu.
27. Zvino ani nani usingatakuri muchinjikwa wake akanditevera, haangavi mudzidzi wangu.
28. Nokuti ndiani wenyu, unoti achida kuvaka rusvingo, usingatangi kugara pasi, akaverenga kudhura \_add kwayo\_add*, kana ane \_add mari\_add* yokuipedzisa nayo?
29. Kuti zvimwe akateya nheyo akakoniwa kupedzisa, vose vanovona vanotanga kumuseka,
30. vachiti: Uyu munhu wakatanga kuvaka, asi akakoniwa kupedzisa.
31. Kana ndoupiko mambo, kana achienda kuhondo akamirisana nomumwe mambo, usingatangi kugara pasi, akabvunza kana angakwanisa, nezvuru gumi, kusangana nounovuya akamirisana naye nezvuru makumi maviri?
32. Asi kana zvisakadaro, iye achiri kure, unotuma nhume, kundokumbira mashoko orugare.
33. Saka saizvozvovo, aninani kwamuri usingasiyi zvose zaanazvo, haangavi mudzidzi wangu.
34. Munyu wakanaka; asi kana munyu usingachivavi, ucharungwa neiko?
35. Hauchina kufanira kunyange pamunda, kana padutu romupfudze; vanourashira kunze. Unenzeve dzokunzwa, ngaanzwe.